Kwaye ekugqibeleni i-12-intshi iMacBook 2017 ikwizandla ze-iFixit | Ndisuka mac
Izolo nje ukuhla kwezinto ezintsha 4 intshi 21k iMac yi-iFixit, iyakwenza kwaye oku kusishiyele iinkcukacha ezintle malunga nokuphakathi kwayo kunye nezinye ezingalunganga. Ngamafutshane, eyona nto intle malunga neMac entsha yayikukuba i-in-one yayi-modular kwakhona ngokwenkqubo kunye ne-RAMKe ngoko, kwixa elizayo kwaye ihlala isezandleni "zengcali" izixhobo zinokudityaniswa zitshintshwe kubulelwa into yokuba ayithengiswa kwibhodi yomama.
Kwimeko entsha MacBook eyi-intshi eyi-12 kunye 13 intshi iMacBook Pro eneTouch Bar, eboniswe kwinqaku lokugqibela ngoMvulo, nge-5 kaJuni, utshintsho oluncinci ngokubhekisele kumbindi ngaphaya kwezinto ezintsha ngohlobo lweeprosesa ezingcono.
Zimbalwa iinguqu kwiMacBook Retina 12 ″
Kule meko, izixhobo azitshintshi kwaphela ngokubhekisele kuhlobo lwangaphambili olukhutshwe yiApple. Oku akuthethi ukuba akukho lutshintsho kumatshini ukongeza ukongezwa kweeprosesa ezintsha, umzekelo utshintsho oluncinci kwibhodi yezitshixo kuba kule meko banyusa inkqubo yamabhabhathane esizukulwana sesibini ngokwe-iFixit.
Ngokubanzi I-12-intshi iMacBook iyafana ngaphakathi.
Ezi modeli zamva nje zivulwe yi-iFixit, bonisa ukuba ifayile ye- iprosesa entsha, i-RAM kunye nememori yefowuni zithengiswe ngokupheleleyo ebhodini Oko kuthetha ukuba kwimeko yokusilela kufuneka sicinge ngokulungiswa okubiza kakhulu kwaye kunzima. Sishiya ifayile ye- Nxibelelana neFixit ukuba ufuna ukubona ezinye iinxalenye zolu disassembly, kodwa sele sikuphathele phambili ukuba iyafana kakhulu noko sikubonileyo kuhlobo lwangaphambili lwale Apple MacBook.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iikhompyuter zeMac » these » Kwaye ekugqibeleni i-12-intshi iMacBook 2017 ikwizandla ze-iFixit